> Resource> Naghachi> Desktọpụ Data Recovery: Olee naghachi Data si Desktọpụ Computer
Olee Otú M Pụrụ Naghachi Desktọpụ Data?
M nwere Dell kọmputa nke desktọọpụ. M formatted a nkebi na ya n'ihi na m chọrọ ọcha kọmputa m. Ya mere dị mwute ikwu na faịlụ niile na na nkebi na-arahụ. M na-eche na-e ụzọ ụfọdụ na m nwere ike gbapụta m furu efu faịlụ? Biko nyere! Ekele.
Ọ bụ n'ezie ihe mwute mgbe a na desktọọpụ data ọnwụ nke mere. Ị na-eche ndidi n'ihi na ị faịlụ nwere ike akwụsị-adịgide adịgide. Ma nke a abụghị kpọmkwem eziokwu. A furu efu faịlụ, nke ga-chọpụtara dị ka keerughi data mgbe ị kwụsịrị ha, ka bụ ndị na na gị na desktọọpụ si ike mbanye. Nke a pụtara na ị pụrụ effortlessly gbapụta furu efu faịlụ n'ihu ọhụrụ data na gị na desktọọpụ na-edochi ha.
Naghachi data si kọmputa nke desktọọpụ, i nwere ike ịgbalị a desktọọpụ data mgbake omume dị ka Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. N'agbanyeghị ihe mere na gị faịlụ furu, dị ka nhichapụ, formatting, ma ọ bụ usoro ike mbanye okuku, ị nwere ike gbapụta ha na Wondershare Data Recovery. A na-eju ngwá ọrụ bụ ike naghachi ọtụtụ ụdị faịlụ site na desktọpụ gị ike mbanye, gụnyere videos, photos, ụlọ ọrụ akwụkwọ, ozi ịntanetị, tec. Ọ bụ dakọtara na fọrọ nke nta niile desktọọpụ ụdị dị ka Lenovo, Dell, HP, Apple wdg
Ị pụrụ ịmalite kọmputa nke desktọọpụ data mgbake site na nbudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery n'okpuru. Biko họrọ nri version maka gị na laptọọpụ ọrụ usoro.
Igosi na Desktọpụ Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ndị na-esonụ ndu bụ maka na desktọọpụ na-agba Windows os. Mac desktọọpụ nwe ike hazie mgbake na yiri arụmọrụ na na na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode naghachi data site na desktọọpụ
Mgbe wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume na gị na desktọọpụ, ị pụrụ ịhụ a mmalite window na depụtara 3 mgbake ụdịdị. The atọ mgbake ụdịdị nwere onwe ha atụmatụ, dị nnọọ ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru.
Ebe a, ka na-"Echefuola File Iweghachite" dị ka a na-agbalị n'oge mbụ.
Cheta na: Biko adịghị wụnye ihe omume na draịvụ ike ma ọ bụ nkebi na gị faịlụ furu si.
Nzọụkwụ 2 Iṅomi na desktọpụ gị ike mbanye ma ọ bụ nkebi
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga na-akpaghị aka ịchọpụta na-egosi niile partitions na gị na desktọọpụ, na ị dị nnọọ mkpa họrọ otu n'ime ha na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu furu efu data.
Cheta na: Ọ bụrụ na faịlụ na desktọpụ gị furu n'ihi ike mbanye ma ọ bụ nkebi formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 weghachite data site na desktọọpụ nhọrọ
Ke akpatre nzọụkwụ, hụrụ faịlụ na desktọpụ gị ike mbanye ga-egosipụta na ụdị faịlụ ma ọ bụ ụzọ. Ị nwere ike ịlele faịlụ aha si ka i wee mara otú ọtụtụ faịlụ na ị ga-enwe ike iji weghachite.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi 'ịrụcha desktọọpụ data mgbake. Ị ga mkpa iji họrọ a ụzọ na gị na desktọọpụ ịzọpụta natara data, ya biko adịghị ịzọpụta data azụ mbụ ụzọ.
Olee otú naghachi data si a jiri ma ọ bụ na-emezughị desktọọpụ ike mbanye?
Ọtụtụ desktọọpụ ọrụ okosobode a nke kwa. Ha desktop ọ bụla ogologo na-agba ọsọ. Na nke a, Ohere nke na-agbake desktọọpụ data ka na-adị. I nwere ike ịgbalị na ijikọ ike mbanye nke gị na desktọọpụ ọzọ na kọmputa na-eji Wondershare Data Recovery iji weghachi kwa. Ma biko hụ na draịvụ ike na-agba ọsọ nke ọma na ọzọ na kọmputa.
GIF Image Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ GIF Image